Ngaba ukungabikho kwemisebenzi kudwelisiwe? | Ezezimali
Ngaba ukungabikho kwemisebenzi kudwelisiwe?
USusana Maria Urbano Mateos | | I ngxaki
Enye yezona zinto zixhalabisayo onokuba nazo xa ungaphakathi imeko yokungasebenzi ukuba ngaba ngeli xesha lexesha kucatshuliwe. Kukho imibuzo eliqela ekufuneka uyiqwalasele ukuze unike impendulo ecacileyo kulo mbuzo, kodwa into yokuqala ekufuneka siyenzile ngokuqinisekileyo kukuba iza kuba imeko yokungasebenzi.
Imeko yentswela ngqesho yaziwa ngcono njenge imeko yentswela ngqesho ngokusemthethweni, kwaye ichazwa njengemeko apho umsebenzi abona isidingo sokucela i isibonelelo sokungasebenzi. Ke nayiphi na imeko ekwenzeka kuyo oku sisitrayikhi. Ukucacisa ngakumbi, yiyo nayiphi na imeko ethi ngenxa yezizathu ezingaphaya kolawulo lomntu, ayeke ukusebenza, oku kunokuba sisiphelo sekhontrakthi yethutyana, kunye nokumiswa kwengqesho okwethutyana ngenxa yokusweleka okanye ukukhubazeka umqeshi, phakathi kwezinye izizathu.
Nje ukuba siyiqonde into imeko yentswela-ngqesho okanye imeko yentswelangqesho, ngoku sinokuqalisa ukuhlalutya ukuba sikule meko sinokuqhubeka nokuthengisa. Kwaye kukuba inkxalabo yesininzi iqala kwinto yokuba ukuze ukwazi ukuqokelela i-50% yomhlala-phantsi ohambelana nayo kubalulekile ukuba ube negalelo kangangesithuba seminyaka eli-15 ubuncinci, ngelixa ukwazi ukusebenza nge-100% Kuyimfuneko ukuba ube negalelo kangangeminyaka engama-35. Kodwa ngaphambi kokuqhubeka kufuneka siyiqonde ngcono ukungaqeshwa.
1 Isibonelelo sokungaphangeli
2 Isibonelelo sokungaphangeli
3 Nini ukuba idwelisiwe
4 Xa ingadweliswanga
5 Olunye uncedo
Kukho Iindidi ezimbini zoncedo lukarhulumente Ukunciphisa iziphumo zentswela-ngqesho, enye yeyona ndlela yokungenelwa kwengqesho, kunye nenye, esiza kuthetha ngayo ukungaqeshwa. Olu ncedo lokugqibela luthathelwa ingqalelo kwinqanaba lokunikela, oko kukuthi lilungelo kuphela labasebenzi abafake igalelo ekuswelekeni kwemisebenzi, kwaye banikwa phantsi kweemeko ezithile ezizodwa, ezi zilandelayo.
Into yokuqala kukuba kufuneka inikezwe Ukhuseleko oluphezulu lwentlalo, Kuzo naziphi na izikimu ezinegalelo kukungabikho kwemisebenzi, oku kunokufumaneka kwiziko eliqhuba le nkqubo. Ngale ndlela siya kuba nakho ukwazi ukuba singasifaka na isicelo senzuzo yentswela-ngqesho.
Enye into ekufuneka siyifezile ukuze senze isicelo sale nzuzo kukuba nayo kucatshulwe ixesha elincinci lonyaka omnye. Kwaye ukuba emva koku sigxothiwe, ikhontrakthi yapheliswa ngokunikwa amagatya, okanye ukuba umvuzo okanye usuku lokusebenza lwehlisiwe ngaphezulu kwesithathu sexabiso laso eliqhelekileyo, singacela ukungaqeshwa.
Ngoku ubude beli xesha Isibonelelo sinokulingana nexesha esilichazileyo, Ngale ndlela, ukuba sicaphula ukusukela kwiintsuku ezingama-360 ukuya kwezingama-539, siya kuba nelungelo lokuqokelela isibonelelo ngeentsuku ezili-120, ngelixa sibenegalelo ngaphezulu kweentsuku ezingama-2159, siya kuba nakho ukuqokelela ukuya kwiintsuku ezingama-720.
Uncedo lwengqesho lunceda Luncedo lwezoqoqosho olukhoyo ukuxhasa abo basebenzi bazisebenzisileyo izixhobo abazinikiweyo zenzuzo yentswela-ngqesho okanye abathi, kwasekuqaleni, bangahlangabezani nazo zonke iimfuno zokuba bafaneleke ukuba bafumane isibonelelo. Olu ncedo lunalo imigaqo kunye neemeko zabo Ukuze sikwazi ukufaka isicelo, makhe sibone ukuba zeziphi ezi zinto.
Into yokuqala kukucacisa ukuba zikhona Iindidi ngeendidi zezibonelelo zokungaqeshwaEyokuqala kuzo yeyonikelo olunganelanga. Kwicandelo elidlulileyo, sabona ukuba ubuncinci bexesha elicatshulweyo ukuze ukwazi ukucela isibonelelo ngunyaka omnye; Ukuba le mfuno ayifezekiswa kwaye ezinye iimfanelo zosapho kufuneka zifezekiswe, inkxaso-mali yegalelo elingonelanga inokucelwa.
Uhlobo lwesibini lwenkxaso yile uncedo oluqhelekileyo, Eli tyala liyafana nelokuqala, into efunekayo kukuba umfaki-sicelo unoxanduva losapho, kodwa kule meko umenzi-sicelo Ulusebenzisile uncedo lwakho lokungaphangeli.
Uhlobo lwesithathu lwe Inkxaso-mali yeyabantu abangaphezulu kweminyaka engama-45 ubudalaKule meko, uncedo lolwabo bagqithile kwixesha eliqingqiweyo lesibonelelo sokungabikho kwemisebenzi, kwaye bangaphezulu kweminyaka engama-45 ubudala, kufanele kuqatshelwe ukuba kule meko akuyomfuneko ukuthobela imfuneko yokuba nosapho uxanduva.
Ileta yohlobo lwenkxaso yeyabantu abangaphezulu kweminyaka engama-55 ubudala; Oku kusebenza kwabo bantu baneminyaka engaphezulu kwama-55 ubudala kwaye abangekabinayo igalelo ngokwaneleyo ukuze bakwazi ukuthatha umhlalaphantsi; Le nkxaso isebenza kwasekuqaleni ade umntu afike kumzuzu wokuthatha umhlalaphantsi.
Inzuzo yesihlanu yentswela-ngqesho ekhoyo yile ababuya kwilizwe labo. Olu hlobo lwenkxaso luyasebenza kubaphambukeli abagqiba kwelokuba babuyele eSpain, kwaye babuya kwilizwe elingenasivumelwano sokungabikho kwemisebenzi kunye neSpain, iyasebenza xa ilizwe ababuyela kulo lingelilo ele-European Union. .
Uhlobo lwesithandathu lwegranti lolwabo ukhululwe entolongweni, Olu ncedo lusebenza kwabo bakhululwe entolongweni, abathe bagwetywa isithuba esingaphezulu kweenyanga ezi-6 kwaye abanalungelo lakucela naluphi na uncedo.
Inkxaso yohlaziyo lokukhubazeka okuthile Luhlobo lokugqibela lwenkxaso-mali olukhoyo, kwaye oku kusebenza kwabo banokhubazeko olusisigxina olususwe ngenxa yokuphuculwa kwezempilo; Enye into ekufuneka ifezekisiwe kukuba kukho ukungabikho kwengeniso.
Uhlobo lokugqibela lwenkxaso enokusetyenziswa yingeniso yezolimo, kodwa olu hlobo lusebenza kuphela eAndalusia nase-Extremadura kwaye lusebenza kubasebenzi bexeshana kushishino lwezolimo.
Ke, xa kukho imeko ekungekho ngenxa yomntu ukuba ayisebenzi, inkxalabo iyavela malunga nokuba ixesha “elilahlekileyo” liya kuba nakho na ukuqokelela ipesenti yepension ehambelana nexesha lomsitho wangaphandle kubangela ukupheliswa kwemisebenzi. Ukuhlangabezana nale mfuno, siza kugubungela iimeko ezidweliswe kuzo kwaye ezingekhoyo kuzo, ukuze wonke umntu afumane impendulo ayifunayo.
Nini ukuba idwelisiwe
Imeko yokuqala apho idwelisiwe kuxa, kwimeko yentswela-ngqesho, umntu okhankanywe ngentla ahlawulwayo. ukungaqeshwa. Kwaye isiseko esiza kwenziwa ngalo igalelo kule meko sihambelana nomvuzo wethu, ukongeza kuloo, eminye imicimbi iya kuqhubeka icatshulwe kwimeko eziqhelekileyo ezinje ngokukhubazeka okusisigxina, isibonelelo sokufa, ukukhubazeka okwethutyana phakathi kwezinye imiba. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ukhathalelo lwempilo kunye noncedo lwamayeza luyafumaneka. Ke ukuba le yimeko yakho, impendulo kukuba iyaqhubeka nokuthengisa.
Imeko apho kungekho galelo kuxa unesibonelelo sokungaqeshwa. Njengoko besibonile ngaphambili, isibonelelo sokungabikho kwemisebenzi sinomda wexesha onokuqokelelwa, kwaye unikwa ngexesha ebesinikela ngalo; kwaye xa ixesha liphelile, ukuba umsebenzi awufunyanwanga, akusekho lungelo lokuqokelela isibonelelo, kwaye ke ngenxa yoko inkxaso iyacelwa, oku kuya kuba negalelo kwimicimbi enjengezempilo kunye nokhuseleko losapho; kodwa umhlala-phantsi, igalelo liya kwenziwa kuphela ukuba umntu ungaphezulu kweminyaka engama-55 ubudala, kungenjalo ixesha alizukudweliswa.
Ukushwankathela, inyani yokuba ingaba senza igalelo lokuthatha umhlala-phantsi okanye awusisebenzisi ngexesha lonyaka apho singasebenziyo iya kuxhomekeka kwimeko ethile esizifumanisa sikuyo, esi yayisisikhokelo ngokubanzi sokuba sikwazi ukuba ixesha lethu linegalelo na.
Ngoku, sifunde malunga ne iintlobo zoncedo lokungasebenzi ukuba sele bekho abo sinokuba ngababolekisi ngenxa yeemeko zethu, kodwa ukuba imeko yethu ayihambelani nayiphi na kwezi esele sizikhankanyile, unokujonga enye yezi zilandelayo.
Uncedo lokuqala olunokwenzeka sisicwangciso esilungiselela okoEsi sicwangciso siluncedo olusebenza kwiimeko ezizodwa, apho umntu azisebenzisileyo izibonelelo ezabelwe izibonelelo zokungaphangeli okanye zenkxaso. Kwaye esi sicwangciso sisebenza iinyanga ezi-6 apho abangasebenziyo bangafumani msebenzi.
Inkqubo ye-Uncedo lwesibini yiRAI, okanye ingeniso esebenzayo yokufaka, kwaye oku kuluncedo kumaqela anobunzima ekufakweni kwabasebenzi; kodwa inxalenye yeemfuno kukuba baneminyaka engama-45 ubuncinci ubudala, okanye bakhubazekile okanye ukuba bangamaxhoba obundlobongela.
Uncedo lokugqibela esiza kulukhankanya ngu I-PAE okanye iNkqubo yenkqubo yeNgqeshoInkqubo ekhonza i-euro ezingama-426 ngenyanga ezinokufunyanwa kwiinyanga ezi-6; kwaye yeyabantu abangaphangeliyo ixesha elide abanoxanduva oluthe ngqo losapho.
Ngaphandle kwamathandabuzo kukho amathuba okuba sonke sizifumane sikwimeko apho singenamsebenzi osisigxina, kwaye nangona singazisebenzisa zonke ezi zinto zoncedo kuhlala kubalulekile ukuhlala sikhangela umsebenzi ukuze sikwazi ukuqhubeka nobomi bethu bemihla ngemihla , kwaye ngaloo ndlela sigcine umgangatho wobomi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Uqoqosho ngokubanzi » I ngxaki » Ngaba ukungabikho kwemisebenzi kudwelisiwe?
Uyibuyisa njani irisithi
Imali yabantwana bakho kunye nemfundo yabo yezemali